६२ वर्ष पुरानो रंगशाला, जहाँ विश्वकपको उद्घाटन र समापन हुँदै ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
६२ वर्ष पुरानो रंगशाला, जहाँ विश्वकपको उद्घाटन र समापन हुँदै !
Posted by Pariwartan Devkota | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १८:५४ |
३१ जेष्ठ, काठमाण्डौं । तत्कालिन सोभियत संघले खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सन् १९५६ मा बनाएको र‌ंगशालामा बिहीबार विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकपको उद्घाटन हुँदै छ। राजधानी मस्कोस्थित लुजिनिकी स्टेडियम २१ औं विश्वकप आयोजना हुने १२ र‌ंगशाला भएपनि यसको विषेश चर्चा छ। लुजिनकीमा प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन हुने छ। यसको मतलब प्रतियोगिताको फाइनल पनि लुजनिकीमै हुने छ।
यस रंगशालाले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेको छ। सन् १९८० को समर ओलम्पिक खेलकुद र सन् २००८ को युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फाइनल यही रंगशालामा आयोजना भएको थियो।
लुजनिकीमा ३ हजारभन्दा बढी फुटबल खेल आयोजना भईसकेका छन्। विश्व प्रशिद्ध कलाकारका कन्सर्टहरु यस रंगशालाले देखिसकेको छ। विश्वकपकै लागि भनेर सन् २०१३ मा लुजनिकीको मर्मत सुरु भएको थियो। र‌ंगशालाको प्यारापिट बढाईएको छ । अहिले यस रंगशालाको दर्शक क्षमता ८० हजार छ। विश्वकपका लागि भनेर रंगशालाको एथलेटिक्स ट्र्याक हटाईएको छ।
Previousडा उपेन्द्र देवकोटा : एक आदर्श
Nextविश्वकपको उद्घाटन खेलमा साउदीविरुद्ध रुसको शानदार जित
कडा सुरक्षा घेराका बीच स्टिभ स्मिथ घर फिर्ता
१४ चैत्र २०७४, बुधबार २०:२५